I-villa emangalisayo enedama lokuqubha eMbour - I-Airbnb
I-villa emangalisayo enedama lokuqubha eMbour
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguCheikh
I-villa enkulu enechibi labucala kunye nayo yonke intuthuzelo eyimfuneko kwiholide ekhethekileyo. Ibekwe eMbour malunga nemizuzu eyi-10 ukusuka elunxwemeni, iiklabhu zasebusuku zolwandle lwaseSaly kunye neevenkile ezinkulu ezinjengeAuchan kunye neCasino.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo, onke amagumbi okulala anomoya opholileyo, oomabonakude ababini abanomjelo, i-intanethi ye-wifi ekhoyo kunye neegaraji ezimbini zabucala. Sikwanazo neekhamera zokucupha kunye nonogada ngalo lonke ixesha.
Sinedama lokuqubha labucala elihle kakhulu, unogada osemsebenzini, umgcini wendlu kunye nomntu osebenza egadini onyamekela ukugcinwa kweegadi.
Indlu iphangalele kakhulu kwaye ibonelela ngegadi enkulu kakhulu, amagumbi anomoya opholileyo anebalcony kunye neendawo ezininzi eziluhlaza zokuphumla. Kukho kwakhona uqhagamshelo lwe-wifi yasimahla kubathengi.
Kukho ikhitshi elikhulu kunye nezixhobo zokosa okanye zokosa.
Bonke abamelwane banobubele kakhulu. Nceda uphawule ukuba indlu esemva kwethu isakhiwa yaye abakhi basenokuba basebenza esizeni ebudeni bemini.
Umbuki zindwendwe ngu- Cheikh
Ngokwesicelo sakho, sinokukunika ukutya kwasekhaya okanye kwasentshona, ukuyolisa kunye nokhenketho olukhokelwayo kunxweme oluncinci kunye nelizwe lonke. Konke oku ngamaxabiso angenakoyiswa